အုန်းမောင်းခေါက်ပြီ (၁၈ နှစ်အောက်မဖတ်ရ … အပျိုကြီးများနည်းယူရန်သာ)
HomeBooksအုန်းမောင်းခေါက်ပြီ (၁၈ နှစ်အောက်မဖတ်ရ … အပျိုကြီးများနည်းယူရန်သာ)
တစ်ခါကရွာတစ်ရွာတွင် ယာယာဟုခေါ်သော သူကြီးသမီး ရုပ်ဆိုးဆိုး အပျိုကြီးတစ်ယောက်ရှိသည်..။ ယောကျာၤးလိုချင်နေတာ လက်လက် ထနေ၏..။
ခက်သည်က ရွာက ကာလသားအားလုံး လက်ရှောင်နေကြ၍ ဘယ်သူကိုမှမချိတ်နိုင် ဖြစ်နေသည်..။
တစ်နေ့တစ်နေ့ အိမ်ပြူတင်းပေါက်မှ ငေးမျှော်နေရတာ အပျိုကြီး ယာယာအဖို့ စိတ်ညစ်စရာကြီး ဖြစ်နေပြီ…။ အိမ်ပြူတင်းပေါက်မှ လူလုံးပြသော်လည်း စဉ့်အိုးကြီး ပိတ်နေသလိုဖြစ်နေသော သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြောင့် ဘယ်သူမှစိတ်မဝင်စားကြ…။
ရွာထုံးစံ ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်းရှိသည်..။ ဆရာတော်ကြီးက သူကြီးအပါအဝင် အားလုံးပေါ် သြဇာရှိ၏…။ ဆရာတော်ကြီးတွင် သာအိ ဆိုသည့် ကျပ်မပြည့်သော တူ တစ်ယောက်ရှိသည်…။ လူပျိုပေါက်ဖြစ် ကြီးကောင် ဝင်နေသော်လည်း ကလေးစိတ်သာ ရှိသေး၍ သုံးစားမရ ဖြစ်နေသည်..။
တစ်နေ့တစ်နေ့ ရွာရိုးကိုးပေါက် ဂွေလှိမ့်၊ ဂေါ်လီရိုက် ကစားလိုက် ကျောင်းပြန် စားလိုက်၊ အိပ်လိုက်ပဲလုပ်တတ်သည်..။ တစ်နေ့ သာအိ ပုဆိုးကွင်းသိုင်း ဂွေလှိမ့်ရင်း သူကြီးသမီး အိမ်ပြူတင်းပေါက် ရှေ့ မှဖြတ်သွားမိသည်…။
ပြူတင်းပေါက်မှ လင်လောင်းမျှော်နေသော သူကြီးသမီး တွေ့သွားသည်…။ ယခင်က အရူးအပေါ သတ်မှတ်ပြီး စာရင်းမသွင်းထားခဲ့သော ဘုန်းကြီးတူ သာအိကို အရွယ်ရောက်နေမှန်း သိသွားခဲ့ပြီ…။ ကလေးစိတ် မကုန်သေးသော သာအိကလဲ ပုဆိုးကိုကွင်းသိုင်းပြီး ဖွားဖက်တော်ပေါ်သည်ကို ရှက်ရကောင်းမှန်းမသိခဲ့ သည်ကိုး…။
သူကြီးသမီး ဖိုးသိုးဖတ်သတ် ဖြစ်ပြီး ကျန်ခဲ့သည်…။ ထိုနေ့ တစ်ညလုံး အိပ်မပျော်တော့ ဟိုလှိမ့်ဒီလှိမ့် နှင့်မိုးလင်းခဲ့ရသည်…။ နောက်နေ့တွေလဲ ပြူတင်းပေါက်က သာအိကို ထွက်မျှော်သည်..။ မတွေ့ရတော့ပိုဆိုးလာသည်..။ ညစဉ် အိပ်ပျက်လာသည်..။ အိပ်ပျော်သွားတဲ့ အချိန်လေးမှာတောင် သာအိနဲ့ အိပ်မက်ထဲမှာ ချစ်ဗျူဟာခင်းသည်ချည်းပဲ မက်နေတော့၏..။ ခက်ပြီ…။
ကြာတော့ ချောင်ကျလာသော သမီးမျက်နှာကိုကြည့်ပြီး သူကြီးကတော် ဒေါ်ဖွ မေးရပြီ…။ “ငါ့သမီး အခုတလော ကောင်းကောင်းလဲ မစားဘူး၊ ညည လဲ တချွတ်ချွတ်နဲ့ မအိပ်ဖူး ဘာဖြစ်နေသလဲသမီး အမေ့ကိုပြောစမ်း”…။
ယာယာ ငိုရပြီ။ နောက်ဆုံး ကြိုက်မရှက် ၊ ပြောလိုက်ရပြီ…။ “အောင်မလေး ဒါများသမီးရယ် ညည်းနှယ် ကြိတ်ခံလို့အေ စောစောကပြောရောပေါ့ သမီးရယ်…။ ရွာဦးဘုန်းကြီးကို ညည်း အဖေ လျှောက်ခိုင်းမှာပေါ့”…။
ယာယာ ဝမ်းသာရပြီ…။ တကယ်လားအမေ အမေတကယ်တောင်းပေးမှာလား…။ ဒေါ်ဖွ သမီးလေးတစ်ယောက်တည်းရှိတာ စိတ်ချမ်းသာအောင် ကတိပေးလိုက်၏..။ ရွာဦးကျောင်းဆရာတော် ….. ဒကာကြီး မဖြစ်ဘူးထင်တယ်နော်…။ ဒီကောင် သာအိက ကလေးစိတ်ပဲရှိသေးတာ အိမ်ထောင်ရေးဘယ်လိုမှ မသိသေးဘူး ဒကာကြီး..။
သူကြီး …… အို ဆရာတော်ကလည်း အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာ သူ့ဘာသာသိသွားမှာပါ..။ သူတို့ချင်း ပေးစားလိုက်ဖို့သာ ဆရာတော်သဘောတူပေးပါ။ ဒီကောင်မကလည်း ဘုန်းကြီးတူကိုမှ ဘာကြည့်ပြီးကြိုက်လဲမသိပါ ဘုရား။ သာအိ မှ သာအိ ဖြစ်နေတော့တာ မအိပ်နိုင်၊ မစားနိုင်မို့ တပည့်တော်လည်း ရှေ့မျက်နှာ နောက်ထားလျှောက်ရတာပါ ဘုရား…။
ရွာဦးကျောင်းဆရာတော် …….. အေးလေ ဒါဆိုလည်း ပေးစားရတာပေါ့…။ ဒီလိုနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ သူကြီးအပေးအယူတည့်ပြီး သဘောတူလိုက်ကြ၏…။ ရွာမှာ မင်္ဂလာပွဲကြီး ခြိမ့်ခြိမ့်သဲကျင်းပလိုက်ကြသည်..။ သို့သော်…သို့သော် သူကြီးသမီးယာယာတစ်ယောက် ဝမ်းသာရမှာလား၊ ဝမ်းနည်းရမှာလား အဖြစ်ကြုံနေရပြီ..။ လိုချင်သည့် ယောကျာၤးတစ်ယောက် အဖေ့ကျေးဇူးကြောင့် ရခဲ့ပြီ..။
သို့သော်…သို့သော် မင်္ဂလာဦးညမှ တစ်ပတ်တိုင်လာခဲ့ပြီ။ သာအိက နေ့ဖက်ဆော့တုန်း ညည တရှုးရှုးနဲ့ ထိုးအိပ်တာကလွဲပြီး မိန်းမကိုလှည့်ကြည့်ကောင်းရမှန်းမသိ…။ ဒီကိစ္စ ထုံးစံအတိုင်း သမီးမှအမေ၊ အမေမှသူကြီး ဆီရောက်သွားသည်…။ သမီးကိုယ်တိုင်က မမြူဆွယ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ ယောက္ခမတွေက သမက်ကိုသင်ရမတဲ့လား…။
နောက်ဆုံး ဆရာတော်ဆီပဲ ရောက်သွားသည်..။ ဆရာတော်ကလည်း ဘုန်းကြီးဒီကိစ္စတွေ မှာ ဝင်မပါချင်..။ သူကြီးကိုပဲ ဖိမာန်တော့သည်…။ သူကြီးကလည်းမျက်နှာငယ်လေးနှင့်…။ ကဲကဲ ဘုန်းကြီးပဲ ဝိနည်းလွတ်ကြည့်ပြောပါမယ်ပေါ့…။ ဒကာကြီး ခဏရှောင်နေ..။
ဟဲ့ သာအိ…။ ဘုရား…။ နင်မိန်းမရတာ ဘာလုပ်ဖို့လဲသိလား…။ မသိပါဘုရား…။ ဟာ ဒီကောင် .. မိန်းမတွေမှာ ကောင်းတာတစ်ခုရှိတယ်ဟဲ့ သာအိရဲ့…။ ဘာများလဲ ဘုရား…။ အေး ငါပြောလိုက်မယ်…။ ညကျရင် သူ့ကိုမေး ယာယာ နင်တို့မိန်းမတွေမှာ ကောင်းကွက်ဘာရှိလဲမေးရင် သူပြတာလုပ်လိုက်လဟဲ့…။ တင်ပါ့ ဘုရား…။ မှတ်ထားနော် ငါပြောတာ ညကျ မေးဖို့မမေ့နဲ့…။ တင်ပါ့ဘုရား…။
ကဲ ဒကာကြီးရေ သွားကြတော့ ဘုန်းကြီးတော့မှာလိုက်ပြီ…။ သွားကြတော့ ဒီကောင် ဒီလောက်တော့ ဒုံးဝေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး…။ သူကြီးတို့ အိမ်ပြန်ရောက်တော့မျှော်နေတဲ့သားအမိကို လက်မလေးထောင်ပြလိုက်တာပေါ့…။ ယာယာ တစ်ယောက်ဝမ်းသာလုံးဆို့ပြီး ညကျ သူ့လင်တော်မောင်စားဖို့ ကောက်ညှင်းပေါင်း ပူပူ၊ အားရှိအောင်သောက်ဖို့ နွားနို့ပူပူလေး စီမံမယ်ပေါ့…။
သာအိကလည်း အစားသောင်းကျန်းတော့ ခါတိုင်းနဲ့မတူ ကောက်ညှင်းပေါင်းနဲ့ နွားနို့နဲ့ ဒီညတော့ စားရချည်သေးရဲ့ပေါ့…။ ဒီညတော့ သာအိ အိပ်ယာထဲက မအိပ်ပဲစောင့်နေတယ်။ သူ့မယားကလဲ မီးဖိုထဲကောက်ညှင်းပေါင်းသွားခပ်နေ..။ ခဏနေ မယားရောက်လာတော့ စားဖို့ပြင်တဲ့သာအိကို ”ဟိုး..ဟိုးဆရာ စားဖို့ခဏနေဦး၊ ဆရာတော်ဘာမှာလိုက်လဲပြောဦးလေ”ဆိုပြီးသတိပေးတော့မှ ဘသားချောက .. အေး ဆရာတော်က မေးခိုင်းတယ်ဟ၊ နင်တို့မိန်းမတွေမှာ ကောင်းကွက်တစ်ခုရှိတယ်တဲ့ အဲ့ဒါဘာလဲငါ့ကို ပြစမ်းဟာ…။
ယာယာ ဝမ်းသာအားရပြတော့တာပေါ့…။ ဒါပဲရှင် ကျွန်မတို့ကောင်းကွက်က…။ ဟေ တကယ်ကောင်းတာလားဟ…။ အဟုတ်ပဲရှင်…။ စားဖို့လောက်သာသိတဲ့ သာအိ ကောက်ညှင်းပေါင်းပူပူကိုယူထည့်ပြီး သူ့မယားကောင်းကွက်နဲ့ တို့စားလိုက်တာ ယာယာတစ်ယောက် အမလေး တပြီး ကောင်းကွက်အပူလောင် ဗြောင်းဆန်လို့ တစ်အိမ်လုံးနိုးကုန်ကြပါရောလား…။
သူကြီးအကြောင်းစုံသိတော့ပေါက်ကွဲပြီး နှလုံးပြူးဆွဲ သမက်ကိုပစ်မယ်တကဲကဲလုပ်နေလို့ မနည်းဝိုင်းဆွဲရပါသတဲ့…။ နောက်နေ့မနက် သူကြီးဒေါကန်ပြီး သမက်ပါခေါ် ဆရာတော်ဆီလျှောက်ပြန်တာပေါ့…။ ဆရာတော်ဘုရား ရှင်းရှင်းသာ သင်ပေးလိုက်ပါတော့ ဘုရား…။ တပည့်တော် ဟိုလင်တရူးမကြောင့်ရှက်လွန်းလို့ ဒီကောင့်ကိုသင်ဖို့ရာ ဘယ်လိုမှပြောမထွက်လို့ပါ ဘုရား…။
ကဲကဲ မင်းတို့အမှု ဘုန်းကြီးတော့ ပတ်ပြီ၊ ကဲ မထူးပါဘူး ဟေ့ကောင်သာအိ ဒီလိုဒီလိုရှိတယ်လို့ နှစ်ကိုယ်ကြားတီးတိုးတီးတိုး သင်ပေးလိုက်ရတာပေါ့…။ အေး ဒါပေမယ့်ငါ့ကောင် အချိန်မရွေးတော့မလုပ်လေနဲ့၊ ရွာဦးကျောင်းကအုန်းမောင်းသံ ကြားမှ (ည ၁၀နာရီခွဲခန့် လူခြေတိတ်ချိန်ကိုဆိုလိုသည်) လုပ်ပေတော့…။
မင်းကြောင့် ငါလဲအာပါတ်သင့်ရပြီ..။ ဒါနောက်ဆုံးပဲ ဒကာကြီး၊ နောက်ဒီကိစ္စနဲ့ ငါ့ဆီထပ်မလာနဲ့တော့ကြားလာ…။ သူကြီးမင်းလည်း ဒီတစ်ခါတော့ မလွဲနိုင်တော့ဘူးထင်ရဲ့ဆိုပြီး သမက်ကိုခေါ် ပြန်ခဲ့တာပေါ့…။ အိမ်ရောက်တော့ သူကြီးကထုံးစံအတိုင်း လက်မထောင်ပြပြန်ရော..။ ဒီတစ်ခါတော့ အပူလောင်မှာကြောက်တဲ့ ယာယာ ကောက်ညှင်းပေါင်းတို့ နွားနို့တို့ မလုပ်ရဲတော့ဘူးပေါ့…။
ညရောက်တော့ ဘသားချောက မအိပ်ဘူး…။ တစ်ခုခုကို စောင့်နေတဲ့ပုံ ဂနာတော့ မငြိမ်ဘူး…။ ရွာဦးကျောင်းက ညဝတ်တက်ဖို့ အုန်းမောင်းသံ တတုံတုံကြားမှ ထလာပြီး မိန်းမရေ မင်းဟိုတစ်ခါပြတဲ့ကောင်းကွက် ပြန်ပြပါအုံးဆိုပြီး …..
” အပေါက်အလန်းတည့်တည့်“မှန်မှန်ကန်ကန် တစ်ညလုံး ကလောဟိလိုက်တာ မိုးလင်းခါနီး လင်းကြက်တွန်မှအိပ်ကြသတဲ့…။ သာအိက တောက်!!! စောစောက မသိခဲ့တာ နာသကွာ ဆရာတော်ပြောတဲ့ ကောင်းကွက် ကောင်းချက်တော့လက်ကုန်ပဲဟေ့ မိန်းမရေ ဆိုပဲ..။ (ကောင်းမှန်းသိ သာအိတစိုစို ဆိုတာ ဒီကစတာဖြစ်မယ်)
အကျေနပ်ကြီး ကျေနပ်နေတဲ့ ယာယာတစ်ယောက် အိပ်ရေးပျက်ပေမယ့် မနက်စောစောထ ဈေးသွားပြီး ချစ်လင် သာအိစားဖို့ ဖွယ်ဖွယ်ရာရာလေးတွေဝယ်ပြီး သူ့အမေဒေါ်ဖွနဲ့ နှစ်ယောက်တူ ချက်ကြ၊ ပြုတ်ကြပေါ့…။ သီချင်းလေးတောင် ညည်းလိုက်သေး…”သူ့အတွက်ဆို အပြုံးမပျက်ပေါင် စိတ်လက်ရှည်ရှည်၊ အိစက်ညက်ညောတဲ့ ဖဲမွေ့ယာပေါ်ဝယ် ချစ်တလင်းခေါ်မယ်၊ ချစ်ဗြူဟာခင်းတဲ့တူမောင်မယ်”အမေ မျက်စောင်းထိုးမှရပ်တော့တယ်..။
မနက်စာစားဖို့ ပြင်ပြီးလောက်တော့မှ ဘသားချော နိုးလာတယ်..။ ညကကောင်းကွက်ကို မဝနိုင်သေးဘူး..။ ဆရာတော်မှာထားတဲ့ အုန်းမောင်းသံကိုသာ နားစွင့်နေတယ်..။ ရွာဓလေ့ထမင်းကို ၁၀ နာရီဝန်းကျင်လောက် မနက်စာစားနေကြတာပေါ့…။ သံဃာတွေဆွမ်းစားဖို့ ၁၀ နာရီခွဲ ရွာဦးကျောင်းက အုန်းမောင်းသံလည်းကြားရော ထမင်းစားလက်စ ကဗျာကယာလက်ဆေးပြီး မိန်းမလက်ဆွဲ အိပ်ခန်းထဲဒရွတ်ဆွဲ ခေါ်တော့တာပဲဗျို့…။
ပါးစပ်ကလဲ အုန်းမောင်းခေါက်နေပြီ…။ အုန်းမောင်းခေါက်နေပြီ…။ ဆိုပြီးအော်လို့ သူကြီးကတော်က ကြောင်လို့၊ သူကြီးက သူ့နှစ်လုံးပြူးနဲ့ လိုက်ပစ်ချင်နေတဲ့စိတ်ကိုချိုးနှိမ်ပြီး ထမင်းဝိုင်းကထ အိမ်ဝိုင်းပြင်ဘက် ထွက်ပြေးခဲ့ရပါရောလား…။
ကျောင်းသားဘ၀ RC 1 Canteen မှာ
ကိုညီ(လူရွှင်တော် ညောင်ညောင်) ….
ပြောပြသည့် ပုံပြင်လေး ဖြစ်ပါသည် ခင်ဗျား…။
ဇီးကွက်ကြီး (Scuba Som)